गृहमन्त्री थापाले लिएनन् एआईजी दरबन्दी थप्‍ने सरकारी निर्णयको स्वामित्व- समाचार - कान्तिपुर समाचार
गृह मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा सुनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपेर नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै सरकारको उक्त कार्यले नेपाल प्रहरीको संगठनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचिने तथा 'चेन अफ कमान्ड' भत्किएर अनुशासनहीनता बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'अहिले एआईजीको पद थप्दा समग्र संगठनमा असर गर्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन जारी गरिन्छ ।'
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले एकस्वरमा सरकारले प्रहरी संगठनमाथि 'ज्यादती गरेको' भन्दै संयुक्त रूपमा आक्रोश पोखेपछि गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, 'यहाँहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनेछु । करेक्सन गर्ने भन्ने, स्थगन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।'
सांसदहरू कडा रूपमा प्रतुत भएर सरकारको निर्णयको विरोध गरेकोमा गृहमन्त्री थापाले 'धन्यवाद' भनेका थिए । तर, त्यो निर्णायक ठाउँ कहाँ हो भन्ने स्पष्ट पारेनन् । सम्भवतः उनले डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्नका लागि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समितिका सांसदहरूले भनेका कुरा र दिएका निर्देशनबारे कुरा राख्ने भनेको हुनसक्ने नेकपाका एक सांसदले बताए ।
गृहमन्त्री थापासमेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एआईजीको दरबन्दी थप्दा किन अडान नलिएको भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गरेका थिए । 'नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, अनुशासन मिचियो । कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो । यो मुलुक मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो ? यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो ज्यादती गर्ने छुट दिनु हुँदैन,' गृहमन्त्रीलाई बडुको प्रश्न थियो, 'गृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो ? कसले चलाइरहेको छ यो सरकार ?'
यो प्रश्नका लागि त गृहमन्त्री थापाले प्रतिपक्षी दलका सांसद बडुलाई पनि धन्यवाद नै दिए । 'गृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्‍यो भन्ने कुरा छलफलका क्रममा आए । गृहमन्त्रीले अडान राखेको भए यस्तो निर्णय हुन्थेन भन्ने माननीय बडुलाई उक्त भनाइका लागि धन्यवाद । थप भनिराख्नुपर्नेजस्तो छैन ।'
गृह मन्त्रालयका दुई अधिकारी बोलेपछि बोलेकी सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले आक्रोश पोखिन् । 'गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा नभएको र मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले निश्चित व्ययक्तिलाई हेरेर दरबन्दी सिर्जना गरेको गृहमन्त्री र सचिवको भनाइबाट पाइयो । अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्ति केन्द्रीत गरिएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन,' उनले थपिन्, 'दुई ब्याज जुनियरबाट हिजो सत्ताको दुरुपयोग गरेर डीआईजी बनाइएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो । नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र क्याबिनेटमा पनि छलफल नभई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई पद दिनका लागि दुरासय राखेर थपिएको पद हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन ।'
'प्रशासनिक पदहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा विगतमा डीआईजी र एआईजीका पद कटौती गरिएका थिए । मन्त्री थापाकै पहलकदमीमा ती काम भएका थिए । अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा भएको छ मन्त्रीको असहमति बिना हुन सक्दैन । प्रशासनिक समितिमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । मेरो प्रस्ताव थिएन भन्न पाउनुहुन्न,' पण्डितले भने, 'प्रदेशमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दा तीन जिल्लाका लागि एआईजी चाहिने ? यसको तर्कसंगत उत्तर चाहियो । प्रशासनिक खर्च बढाउँदै उल्टो गतितर्फ डोरिनुपर्ने स्थिति रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।' प्रहरीमा विधि र प्रक्रियामा नै बढुवा हुनुपर्ने भन्दै पण्डितले विधि र पक्रिया नमिच्न पण्डितले सुझाव दिए ।
नेकपाकै सांसद झपट रावलले भने यस्ता विषय अगाडि सारेर सरकारले 'आफ्नै गाला, आफ्नै चड्कन जस्तो' गरेको बताए । सरकारले पञ्चायती शैली अपनाएर आफू नजिकका व्यक्तिलाई उच्च पदमा पुर्‍याउनका लागि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'कसैलाई नियुक्त गर्न मन लागेपछि प्रदेश मातहतको कार्यालय र प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउन मिल्छ ?,' उनको प्रश्न थियो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, 'अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकारको कुरा हो तर अध्यादेशबाट मुलुक चल्नु हुन्न ।'
मन्त्री र सचिवले अध्यादेशअनुसार काम भएको बताएपछि जसपाका सांसद श्रेष्ठले भनेका थिए, 'संसद अधिवेशन बोलाउने बेला भइसकेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउने क्रम चलिरहेकै छ । अत्यावश्यक परेमा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई माइनस गरेर सरकारबाट सर्वसत्तावाद लागू गर्ने अवस्था भयो । समयमा संसद संचालन नगर्ने, संसद छल्ने र अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने ?'
सरकारले अध्यादेश ल्याउने अनि गलत निर्णयलाई कानुनअनुसार भन्ने गरेकोप्रति भुसालको भनाइ थियो । 'चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन रोक्ने । हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने अनि अध्यादेश ल्याउँदै, सरकार चलाउँदै गर्ने ? तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्छु,' उनले भनिन् ।
सांसद संग्रौलाको भनाइ थियो, 'अध्यादेशबाट मुलुक चालउने काम भइरहेको छ । चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने काम बन्द गरियोस् र संसद् अधिवेशन आह्वान गरियोस् ।'
तीन थान भरुवा बन्दुकसहित दुईजना पक्राउ
मंसिर २४, २०७७ प्रतीक्षा काफ्ले
स्याङ्जा — प्रहरीले तीन थान भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ का २४ वर्षीय शिवप्रसाद पाण्डे र ६३ वर्षीय रामबहादुर रानालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
घरमा नै लुकाएर राखेको अवैध भरूवा बन्दुक सुराकीको आधारमा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार शिवको घरबाट एउटा र रिमबहादुरको घरबाट दुईथान भरुवा बन्दुक बरामद भएको हो ।
हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसुरमा उनीहरुलाई बुधबार मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १८:००